China Kedụ uru dị a sourcesaa maka isi ọkụ ọkụ ọkụ nke LED? ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | REIDZ
Kedụ uru dị a sourcesaa maka isi ọkụ ọkụ ọkụ nke LED?
Dịka ọgbọ ọhụrụ nke isi iyi ọkụ, isi iyi ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-ekwenye ọkụ ọkụ wuru ọkụ na-enwu ọkụ, nke nwere ike ibute agba dị iche iche dị ka mkpa si dị; N'otu oge ahụ, enwere ike wuru ya na microcomputer mgbawa, site na njikwa mmemme, iji nweta nsonaazụ agba zuru oke dịka gradient, awụpụ, nyocha, na mmiri; nwekwara ihuenyo ngosipụta nke ụfọdụ nkọwapụta nwere ike dochie ya site na usoro na nchikota nke ọtụtụ isi iyi ọkụ ọkụ, yana usoro dị iche iche, ederede na ihe nkiri, mmetụta vidiyo, wdg. a na-eji ụzọ mgbakwunye ọkụ n'ọhịa na-arụ ọrụ nke ukwuu.
Ibe ọkụ ọkụ ọkụ LED dị iche na radieshon ọkụ ọdịnala na ọkụ na-ewepụta ọkụ (dịka oriọna incandescent, oriọna sodium mgbali elu).
Ebe isi ọkụ ọkụ dị ugbu a nwere uru ndị a na ọkụ:
1. ezigbo seismic na nguzogide mmetụta
Ihe dị n’ime ya bụ isi ihe ọkụkụ bụ ihe edobere n’elu electroluminescent semiconductor n’ihe na-eduga ya wee mechie resin epoxy na gburugburu ya. Enweghị iko shei na ihe owuwu ahụ. Enweghị mkpa ịkwachaa ma ọ bụ jupụta otu gas dị na ọkpọ ahụ dị ka oriọna incandescent ma ọ bụ oriọna ọkụ. Ya mere, isi iyi ọkụ nke LED nwere ezigbo mgbagha ihu na nguzogide mmetụta, nke na-eweta ịdị mma maka mmepụta, njem na ojiji nke ọkụ ọkụ ọkụ nke ikanam ọkụ.
2. mma na kwụsie ike
Enwere ike ịgbanye ọkụ ọkụ isi ọkụ site na ọkụ eletrik DC dị ala. N’okpuru ọnọdụ dị iche iche, mgbanye ọkụ eletrik dị n’agbata 6 na 24 volts, arụmọrụ nchekwa ka mma. Ọ kachasị mma maka iji ya eme ihe n’ebe ọha na eze nọ. Na mgbakwunye, na mpaghara mpụga dị mma karị, isi iyi ọkụ ahụ nwere obere ìhè ọkụ karịa isi ọkụ ọdịnala ma nwee ndụ ogologo. Ọ bụrụgodi na-agbanwu ma gbanyụọ ya ugboro ugboro, ndụ ya agaghị emetụta ya.
3. ezigbo arụmọrụ gburugburu ebe obibi
N'ihi na isi ọkụ ọkụ nke LED anaghị etinye ọla mejupụtara ọla edo n'oge usoro mmepụta, ọ gaghị eme ka mmetọ Mercury pụta mgbe atụfuru ya, enwere ike ịmegharị ya, na-echekwa akụ na ichedo gburugburu.
4. oge nzaghachi ọsọ ọsọ
Oge nzaghachi nke oriọna na-enwu enyo dị milise seconds, oge nzaghachi nke ọkụ ọkụ bụ nanoseconds. Ya mere, ejiri ya mee ihe n'ọtụtụ ebe ọkụ eletrik na ọkụ ụgbọ ala.
5. ezigbo mgbanwe ọkụ
Dabere na ụkpụrụ nke isi ọkụ ọkụ LED, a na-agbanwe nchapụta ma ọ bụ ntopute nke ọma site na isi dị ugbu a. Ya ugbu a na-arụ ọrụ nwere ike buru ibu ma ọ bụ obere n'ime oke iche, ma nwee ezigbo mmeghari anya, nke na-atọ ntọala maka ịmara ọkụ na afọ ojuju njikwa nke isi ọkụ ọkụ.